Keega | September 2021
Keega WASC ama 'keega yicibta labeen dhanaan ee cad' ayaa la isticmaali jiray sanado badan waana la habeeyay marar badan waana hab fudud oo lagu sameeyo dhadhanka keega sanduuqa oo aad ugu eg xoq.
Kaliya ma ahan keegga qaansoroobaad qurux badan oo midab leh, laakiin sidoo kale wuxuu dhadhamiyaa runtii dhadhan fiican. Waxaa laga sameeyay qaansadayda cake ee jilicsan ee jilicsan
Cake champagne pink leh sonkor bunni fudud buttercream, goobooyin sonkor ah iyo dhalada champagne aafidda cuf isjiidadka!
Shukulaatada 'WASC' waa mid fudud in la sameeyo, oo ka buuxa dhadhan iyo dhadhan ahaan ugu dhow sida dhabta ah. Diyaar uma ahan dubista xoqida? Isku day shukulaatada WASC!
Cake Strawberry Fresh leh Strawberry Buttercream Recipe
Keegga Strawberry ee lagu sameeyay dhimista miraha qaro weyn ee keegga iyo dhaxanta ayaa ka dhigeysa keegga miraha dhadhanka ugu fiican dhadhamiya weligiis!
Sida loo sameeyo keegga ugu fiican ee vaniljka ee leh habka kareemada celisa. Aad u qoyan, muuqaal jilicsan iyo dhadhan lama ilaawaan ah.
Waad jeclaan doontaa cunnadan keegga cad maxaa yeelay waa jilicsan tahay, jajabka jilicsan ee afkaaga ku dhalaalaya dadku had iyo jeer way la yaaban yihiin sida ay u qoyan tahay!
Cake-ka ugu Fiican Gluten-Bilaashka leh Qaboojinta Strawberry Bilaashka ah ee Sonkorta
Ma rumaysan doontid inay tani tahay keeg ka madax-bannaan gluten-ka! Lagu dhajiyay baraf qabow cusub oo aan sonkor lagu darin, keegani waa daaweyn dembi la'aan!
Keeg canjeelo ah oo u eg isku duub canjeelada imika la dubay, sharoobada, subagga iyo qaar buluug ah laakiin runtii waa keeg! Xitaa dhadhanka ayaa dhadhamiya sida canjeelada! Cake aad u xiiso badan oo fudud.
Keegga Berry Chantilly oo lagu sameeyay lakabyo jilicsan oo keeg ah vanilj, miro daray ah, iyo qabow dhalaalaya oo mascarpone ah. Keega xagaaga ee ugufiican!
Keega Kookaha Koofureed oo leh Qaboojiye farmaajo
Qumbaha la shiilay, caanaha qumbaha, iyo caanaha subagga ayaa siiya keegga qumbaha dhadhan cajiib ah. Waxay u egtahay si isku mid ah oo leh kareemka kareemka qumbaha!
Kani waa cunto karinta caadiga ah ee keega jilicsan ee casaanka ah ee lagu sameeyay subagga caanaha, khalka iyo budada kookaha yar! Dareenku waa subag, jilicsan oo qalafsan!
Cunto kareemka jilicsan ee jilicsan ee jilicsan
Keegga jilicsan ee jilicsan ee guriga lagu sameeyo ayaa ka helaya dhadhankiisa iyo jilicsanaanta jilicsan caano caano iyo saliid taas oo ka dhigaysa mid aad u qoyan oo jilicsan.
Cunto Cake Shukulaatada Triple ah
Cunnooyinka ugu cajiibka badan, qoyan seddexaad shukulaatada keega oo leh jajab shukulaato jajab ah iyo barafowga shukulaatada! Kuwa jecel shukulaatada kaliya!
Liin-buluug Bulukaanka Cake Recipe
Keeggan liinta buluugga ah ee qoyan iyo jilicsan ayaa ka dhergaya dhadhanka liinta, miraha buluugga ah ee cusub iyo jiiska qaboojiyaha kareemka dhadhanka leh! Wanaagsan xagaaga BBQ!
Vanilla Cake Recipe Cake
Kani waa kan ugu fiican vanilj la isku qurxiyo oo la karinayo iyadoo la isticmaalayo bur AP ah oo aan waligay isku dayay. Waa qoyaan, jajab jilicsan ayaa ku fiican isticmaalka keegyada arooska ama keegga la farsameeyey dhadhanka ayaa si fudud loola qabsan karaa si loo sameeyo dhadhanno caado ah!
karinta aasaasiga ah ee rootiga laga soo bilaabo xoq
fudud rootiga strawberry karinta laga bilaabo xoq
sida loo jaro keeg jaceyl
sida loo sameeyo dhaldhalaalka macdanta ah ee la cuni karo